Big Vola Slingo Bonus |
Big Vola Slingo Bonus
Raha toa ianao ka mpankafy ny lalao Slingo izay ankapobeny ny fitambaran'ny slots sy ny bingo, Ary Big vola Slingo Bonus dia tena mendrika ny try. Tsy misy na iray fa 6 toerana izay afaka milalao ity lalao ity. Afaka mifidy ny maka ny safidy alohan'ny manomboka ny lalao. Ny fandresena Slingo mety io no goavana izay afaka handresy ny iray £ 250.000 Jackpot. Mba hahazoana izany £ 250.000 Jackpot, dia mila mameno ny isan'ny andalana indrindra raha vao araka izay azo atao. Izany dia efa natao sy mivelatra ny IWG lalao rindrambaiko mpandraharaha sady nataon'ny sasany asa tena mahavariana ny sary sy ny gameplay.
Play Big Slingo sy handresy Vola £ 250.000 Jackpot
Ity Slingo dia iray monja amin'ireo tsara fanahy. Tamin'izay ny fanombohan'ny lalao, ianao dia nomena fahafahana misafidy eo anivon'ny amin'ny toerana enina mba hilalao avy. Ny toerana dia Jokers Hamlet, Golden Fields, Royal Forest, mpanao trafika Cove, Diamond Peak sy Lucky Gulch. Toerana tsirairay ireo dia manana vola hafa izay manomboka avy ho ambany dia ambany toy ny Joker 50p ny Hamlet, ary mihatra amin'ny £ 15 ho an'ny Lucky Gulch. Ny gameplay ny tsirairay ihany izany toerana izany. Ny hany maha samy hafa dia ny loka vola sy ny interface tsara ny lalao. Misy vintana ho anareo mba haka ny £ 250.000 jackpot Tamin'ny faran'ny lalao ity.
Big Vola Slingo Bonus Gameplay
Ny gameplay ity lalao mahavariana dia tena tsotra. Raha vao manomboka, dia homena 6 safidy ny toerana tianao hilalao amin'ny. Rehefa avy mifidy iray amin'ireo enina safidy, dia ho entina any amin'ny lehibe efijery. Bet tsirairay manome anao 6 spins ary vao tsy maintsy ho ny ambony indrindra ny isan'ny andalana. Ianao izao maintsy tsindrio ny bokotra voalohany, ary hatramin'ny 4 Jokers kosa no hamindrana eo amin'ny solaitrabe. Tsirairay na manao kofehy ireny, dia haneho maro na manao kofehy ireny maimaim-poana. Ny jokers izay nanampy tamin'ny voalohany ny gameplay dia hipetraka fa ny boaty, ary hianao kosa tsy mba hanamarihana azy ireo eny amin'ny latabatra. Tsipika tsirairay dia hanana ny zana-tsipìka amin'ny lohany mampiseho ny habetsaky ny vola izay afaka handresy amin'ny fifaninanana ho amin'izany tsipika. Afaka handresy toy ny lehibe toy ny £ 250.000 jackpot amin'ny alalan'ny vita ireo andalana.
Slingo manana tena mahagaga ny sasany fitsipika ary tena tsara tarehy sary. Izany no mazava ho azy fa ny vahoaka pleaser amin'ny lehibe £ 250.000 jackpot ary mora gameplay. Tokoa ianao handeha manana be dia be ny fahafinaretana milalao izany raha misy bingo, na ny slot mpankafy.